Sida loo beddelo astaan ​​kasta oo ku jirta Windows 8 | War gadget
Sida loo beddelo astaan ​​kasta oo Windows 8 ah
Khamri Dila | | Software, Windows
Sida aan u ogaanno cusub nidaamka Windows 8, waxaan arkaynaa qaar badan oo ka mid ah wanaaggiisa cusub. Waxaan kuu sharaxnay sida loogu sameeyo ficillo badan nidaamkan cusub, laakiin waligeen kuuguma sheegin ku saabsan sida loo badalo astaamaha uu nidaamku u keeno asal ahaan.
Waxaa jira isticmaaleyaal badan oo jeclaan lahaa in nidaamkooda si buuxda loogu habeeyo sida ay u jecel yihiin, sidaa darteedna, awood u yeeshaan inay beddelaan mid kasta oo ka mid ah fursadaha ay ka mid yihiin astaamaha nidaamka. Maanta waxaan sharxi doonnaa dhowr siyaabood oo lagu fuliyo ficilkan.
Maskaxda ku hay in beddelka mawduuca Windows 8 waxa kaliya ee wax laga beddelaa ay yihiin midabada iyo sawirrada iyo codadka loo isticmaalo kumbuyuutarka, laakiin astaamuhu weli waa isku mid mid kasta oo ka mid ah "mawduucyada".
Maanta waxaad baran doontaa sida loo beddelo astaamaha desktop-ka, astaamaha hawsha, iyo astaamaha nidaamka intiisa kale.
1 Astaamaha desktop-kaaga
2 Ugu dambayntii waxaan wax ka beddelaa astaamaha ku yaal bar-hawleedka
3 Iyo astaamaha nidaamka?
Waxaan ku bilaabaynaa sharraxaad ku saabsan sida wax looga beddelo astaamaha kumbuyuutarka Windows 8. Xaaladdan oo kale, astaamaha kumbuyuutarrada waxaa lagu beddeli karaa qaab fudud oo aan loo baahnayn in loo isticmaalo codsiyada dhinac saddexaad si wax looga beddelo, waxaan si fudud xulo astaanta, samee midig guji oo guji "Guryaha". Markaan ku jirno guryaha astaanta waxaan tagnaa tabta "Helitaanka Tooska ah" oo guji "Beddel astaanta".
Daaqadda u muuqata gudaheeda, waxaan ka raadin karnaa kumbuyuutarkeena si aan ugu dooranno feylka astaanta cusub, taas oo dabcan ay tahay inay lahaato kordhinta .ICO.
Maskaxda ku hay in qaabkan loo beddelayo astaamaha uu aad u gaabis yahay maaddaama ay tahay inaad mid mid gacanta ugu qabato. Sidoo kale, ficilkan waxaa lagu sameyn karaa oo keliya astaamaha desktop-ka.
Ugu dambayntii waxaan wax ka beddelaa astaamaha ku yaal bar-hawleedka
Ka dib markii aan ku baray sida loo beddelo astaamaha kumbuyuutarka ee Windows, aan u tagno sanduuqyada hawsha. Si tan loo sameeyo, waxaan u isticmaali doonnaa codsi ka yimid horumariye kaas oo ka dhigaya inuu qof walba u heli karo bilaash. Waxay ku saabsan tahay barnaamijka 7XILAASHKA. Waxaa loo sameeyay Windows 7, laakiin horay ayaa loo xaqiijiyay inay si fiican ula jaan qaadi karto Windows 8 iyo 8.1.
Codsigan yar ayaa noo oggolaanaya inaan beddelno astaamaha ku yaal bar-hawleedka. Codsiga laftiisa gudahiisa waxaan ku haynaa noocyo astaamo ah oo horey loo sii dejiyey oo aan ka dooran karno.
Si aan u isticmaalno barnaamijkan yar uma baahnin inaan rakibno maaddaama ay leedahay nooc la WAADI KARO. Si aad u isticmaasho barnaamijka waa inaad ka soo dejisaa bogga horumariyaha, ka furfur oo raadi fulinta 7CONIFIER.exe taas oo ay tahay inaan siino rukhsad maamule.
Markii aan fureyno arjiga, dhanka midig waxaan arkeynaa liiska xirmooyinka astaanta ee aan rakibnay si aan udhaqaajino kaliya guji mid kamid ah kadibna guji Codso. Maskaxda ku hay in kaliya astaamaha ku yaal baarka ee ku jira xirmadaas la beddeli doono, taasi waa, haddii dhammaan astaamaha aad ku leedahay baarka aysan ku jirin xirmada, kaliya waxa xirmada ku jira la beddelayo, kuwa aan sidii hore sii ahaanin.
Taasi waa sababta aan kugula talineyno inaad sameysid xirmo sumadeed kuu gaar ah, taas oo ay tahay inaad u gudubto Xirmada / Abuur / Xulista. Halkaas ayaad ku tafatiri kartaa astaamaha aad horey ugu laheyd baarka taasna waxaad u baahan doontaa oo kaliya inaad yeelato dhamaan astaamaha aad rabto inaad ku dhejiso kordhinta .ICO. Kadib waxaad keydineysaa xirmada oo aad u adeegsaneysaa sidaan horeyba u sharaxnay.
Iyo astaamaha nidaamka?
Si loo dhammeeyo, waxaan sharxeynaa sida loo beddelo astaamaha nidaamka ee aan u adeegsan doonno dalab saddexaad oo saddexaad oo ah, sidii kiiskii hore, noo oggolaanaya inaan ku dabaqno xirmooyinka hadda jira ee astaanta nidaamka. Waxay ku saabsan tahay barnaamijka IconPackageer, Softiweerka Stardock ee kuu oggolaanaya inaad ku dalbatid xirmooyinka astaanta oo dhammaystiran nidaamka oo dhan. Barnaamijkani bilaash maaha, laakiin waxaan u isticmaali karnaa muddo 30 maalmood ah oo tijaabo ah.
Macluumaad dheeraad ah - Sida loo beddelo astaamaha toobiye ee Windows 7
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Sida loo beddelo astaan ​​kasta oo Windows 8 ah
10ka barnaamij ee ugu fiican sawir qaadista ee iPhone-ka ee 2013 sida uu qabo Vinagre Asesino
5-ka websaydh ee ugu wanaagsan ee lagu soo dejiyo noocyada